अर्बपति बिल गेट्सले किन मान्छे नियन्त्रण गर्ने माइक्रोचिप बनाउन खोजेका हुन् ? - Jhilko
अर्बपति बिल गेट्सले किन मान्छे नियन्त्रण गर्ने माइक्रोचिप बनाउन खोजेका हुन् ?
२२ वैशाख, काठमाडौ । अमेरिकी अर्बपति तथा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सले मानिसमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने माइक्रोचिप बनाउन खोजेका छन् ।
ओस्कार पुरस्कारबाट सम्मानित रूसी निर्देशक निकिता मिखाल्कोभले अर्बपति बिल गेट्सले यस्तो माइक्रोचिप खोपको आवरणमा ल्याउन लागेको दाबी गरेका हुन् ।
गेट्सले अत्यधिक जनसंख्या समाधान गर्ने खोपको नाउँमा यो माइक्रोचिप बनाउन लागेको उनको भनाइ छ ।
कोरोनाभाइरस संकटका बारेमा धेरै षडयन्त्रकारी सिद्धान्तहरू चर्चामा रहेका छन् । विभिन्न समूहले गुप्तरूपमा महामारीको आवरण विभिन्न किसिमको खोजी कार्य गरिरहेका छन् ।
कोरोना उत्पत्तिको विषयमा पनि विभिन्न किसिमका यस्ता आरोप प्रत्यारोप र गतिविधिहरू चर्चामा रहेको बेला रूसका सम्मानित फिल्म निर्देशकले लामो समय विश्कै सबै भन्दा बढी धनी भएका हाल अमेजनका मालिक पछिका अर्बपति गेट्सले यस्तो चिप बनाइरहेको दाबी गरिएको हो ।
यस्ता केही मुठीभर मानिस माइक्रोसफ्टका संस्थापक गेट्स वरिपरि यसका लागि परिक्रमा लगाइरहेका छन् र कोभिड–१९ विरूद्धको खोप विकास गर्ने प्रयासमा गेट्सलाई उनीहरूले सघाइ रहेका छन् ।
माइक्रोसफ्टले हालै एक पेटेन्ट प्राप्त गरेको छ ।यो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान प्राप्त पेटेन्टले गेट्सले यस्तो किसिमको माइक्रोचिप बनाउन खोजेको देखिएको हो ।
यो पेटेन्ट डब्लुओ/२०२०/०६०६०६ संकेतको छ । यसले मानिसको शरीरमा हुने गतिविधिको प्रयोग एक गुप्त मुद्रा प्रणालीका(क्रिप्टोकरेन्सी) लागि गर्ने जनाउँछ । आधारभूतरूपमा यो एक प्रविधिमा आधारित उपकरण हो । यसलाई खानी वा डिजिटल मुद्राको प्रयोग एक मानिसको शरीरमा उयोगमा गर्न प्रयोग गरिन्छ ।
यो पेटेन्टले ओस्कार सम्मानित निकिता मिखाल्कोभलाई पनि उम्किन दिएन् । मिखाल्कोभले बेसोगोन टीभीमा ‘कसको गोजीमा राज्य?’ अर्थ लाग्ने एक सैद्धान्तिक विषयमा आफ्नो सिर्जना अगाडि बढाइरहेका छन् ।
रोसिया २४ टीभी च्यानलमा शुक्रबार यसको एपिसोड प्रसारित भयो । त्यसपछि यसको प्रसारण नदोहो-याउन भनियो ।यसको विषयवस्तु पेटेन्टसँग मिल्न गएकोले मिखाल्कोभले सेन्सरसीपको कानुन सामना गर्नुप¥यो । त्यसपछि मिखाल्कोभले अमेरिकी अर्बपति गेट्समाथि यो आरोप लगाएका हुन् ।
हाल गेट्स माइक्रोसफ्टको कार्यकारी बोर्डको भूमिकाबाट हटेर आफूले परोपकारी संस्था गेट्स फाउन्डेशनमा सक्रिय रहेका छन् ।
इँटा उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष नारायण सापकोटाका अनुसार यो समय इँटा बनाउनका लागि...
कता पुग्यो नेकपाको तलसम्मको एकता ? लेनिन जयन्तीमा साइत...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता घोषणा भएको पुग न पुग एक वर्ष हुन लागेको...
'लकडाउनलाई सत्ता टिकाउने झेल र घनीलाई थप घनी बनाउने खेल...
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता, स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको कालो बजारी, जम्मा...